ဒီလူမကောင်းလို့ မပေါင်းဘူးဆိုတာမျိုးလုပ်ရင် ကျွန်မ ဆက်ဆံရေးသိပ်ညံ့သွားမှာပေါ့ – Shinyoon
ဒီလူမကောင်းလို့ မပေါင်းဘူးဆိုတာမျိုးလုပ်ရင် ကျွန်မ ဆက်ဆံရေးသိပ်ညံ့သွားမှာပေါ့
November 12, 2020 by Shin Yoon
ဒီလူမကောင်းလို့ မပေါင်းဘူးဆိုတာမျိုးလုပ်ရင် ကျွန်မ ဆက်ဆံရေးသိပ်ညံ့သွားမှာပေါ့ ကောင်းသည် ဖြစ်စေ မကောင်းဘူးဖြစ်စေ ကျွန်မ ပေါင်းတယ်
ကျွန်မအပေါ်ကောင်းတဲ့လူကိုတော့ စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ်ပြီးတော့ ပေါင်းတယ်သူကောင်းသလို ကိုယ်လဲ ပြန်ကောင်းနိုင်ဖို့​ကြိုးစားတယ် အတတ်နိုင်ဆုံးရိုးသားတယ် ပြီးတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တယ်
ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့လူကျတော့ သူက အပေါ်ယံဆိုရင် ကိုယ်ဘက်ကလဲ အပေါ်ယံပဲ သူ့ဘက်က ပြုံးပြတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က ပြန်ပြုံးပြဖို့လဲ ၀န်မလေးဘူး စိတ်ထဲမှာတော့ တိတ်တိတ်လေး blacklist ထည့်ထားတယ်
အလိမ်အညာမှန်းသိလဲ မသိသလိုပဲ နားထောင်ပေးတယ် တစ်ဖက်က အပင်ပန်းခံပြီး လိမ်နေညာနေရတာကို ကျွန်မက သွားပြီးရီလိုက်ရင် တစ်ဖက်လူကို အားနာစရာတွေ ဖြစ်ကုန်မှာလေ ဘာမှမသိသလိုပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနားထောင်တယ် လိမ်နေမှန်းသိနေတာပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆင်ခြင်လို့ရတာပဲလေ
ဒီလိုပါပဲ ကျွန်မတို့ ပတ်၀န်းကျင်မှာ တစ်ရာမှာတစ်ယောက် စိတ်ရင်းနဲ့ ပေါင်းတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေဆိုတာတဖြေးဖြေးနဲ့ ရှားလာခဲ့တယ် အဲ့ဒီကြားထဲမှာမှ ဒီလူက မကောင်းဘူး မပေါင်းဘူးဆိုတာမျိုးသွားလုပ်ရင်တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ပြီး ပျင်းစရာကောင်းနေလိမ့်မယ် ဒါကြောင့် မကောင်းမှန်းသိပေမယ့်လဲ ပေါင်း . . .
ကိုယ်ပေါင်း စိတ်ခွါနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ရေလိုက်ငါးလိုက်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းပေါ့ သူက အပေါ်ယံဆိုရင် ကိုယ်လဲ အပေါ်ယံလေးပဲ ပေါင်းပေါ့ အဲ့လိုမျိုးမှ မဟုတ်ရင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး သိပ်ညံ့သွားလိမ့်မယ် ။
ဒီလူမေကာင္းလို႔ မေပါင္းဘူးဆိုတာမ်ိဳးလုပ္ရင္ ကြၽန္မ ဆက္ဆံေရးသိပ္ညံ့သြားမွာေပါ့ ေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ မေကာင္းဘူးျဖစ္ေစ ကြၽန္မ ေပါင္းတယ္
ကြၽန္မအေပၚေကာင္းတဲ့လူကိုေတာ့ စိတ္ႏွစ္ကိုယ္ႏွစ္ၿပီးေတာ့ ေပါင္းတယ္သူေကာင္းသလို ကိုယ္လဲ ျပန္ေကာင္းႏိုင္ဖို႔​ႀကိဳးစားတယ္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး႐ိုးသားတယ္ ၿပီးေတာ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တယ္
ကိုယ့္အေပၚမေကာင္းတဲ့လူက်ေတာ့ သူက အေပၚယံဆိုရင္ ကိုယ္ဘက္ကလဲ အေပၚယံပဲ သူ႔ဘက္က ၿပဳံးျပတဲ့အခါ ကိုယ့္ဘက္က ျပန္ၿပဳံးျပဖို႔လဲ ၀န္မေလးဘူး စိတ္ထဲမွာေတာ့ တိတ္တိတ္ေလး blacklist ထည့္ထားတယ္
အလိမ္အညာမွန္းသိလဲ မသိသလိုပဲ နားေထာင္ေပးတယ္ တစ္ဖက္က အပင္ပန္းခံၿပီး လိမ္ေနညာေနရတာကို ကြၽန္မက သြားၿပီးရီလိုက္ရင္ တစ္ဖက္လူကို အားနာစရာေတြ ျဖစ္ကုန္မွာေလ ဘာမွမသိသလိုပဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးနားေထာင္တယ္ လိမ္ေနမွန္းသိေနတာပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆင္ျခင္လို႔ရတာပဲေလ
ဒီလိုပါပဲ ကြၽန္မတို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ တစ္ရာမွာတစ္ေယာက္ စိတ္ရင္းနဲ႔ ေပါင္းတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြဆိုတာတေျဖးေျဖးနဲ႔ ရွားလာခဲ့တယ္ အဲ့ဒီၾကားထဲမွာမွ ဒီလူက မေကာင္းဘူး မေပါင္းဘူးဆိုတာမ်ိဳးသြားလုပ္ရင္တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ၿပီး ပ်င္းစရာေကာင္းေနလိမ့္မယ္ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းမွန္းသိေပမယ့္လဲ ေပါင္း . . .
သူက ဆိုးတယ် မချစ်ပါနဲ့လို့ အတန်တန်တားတဲ့ ကြားကမှ မောင် နဲ့ကျွန်မ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်
လူနှစ်ယောက် တွေ့ဆုံခြင်းဟာ အကြောင်းမဲ့သက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူး